Hoso-pifidianana tao Vakinankaratra Nitory ny Fivmpama
Tsy mitombina ny filazana fa efa manana filoha amin�izao fotoana izao ny tranoben�ny varotra ao Vakinankaratra, raha ny fanazavan�ny filoha rejionalin�ny fivondronan�ny mpandraharaha malagasy (Fivmpama) ao an-toerana, Fenosoa Raheriharivony.
Vondrom-pandraharaha 2 no nifaninana tamin’ny fifidianana izay saika natao ny 22 martsa teo kanefa dia nahemotra ny 9 aprily, hoy izy. Araka ny fanamarihany dia ny Fivmpama sy ny fivondronan’ny orinasa ao Vakinankaratra (Fiova) ireo nifaninana ary tao anatin’ny fanemorana ny datin’ny no niaingan’ny ahiahy amin’ny fisian’ny hosoka. Manahirana, ohatra, ny mikarakara ilay antsoina hoe RCS na régistre de commerce et social satria mila pitsompitson-taratasy maro toy ny fanamarinam-panambadiana orijinaly sy vola aloa 8 000 ariary. Io no sakana tsy nahafahan’ny ankamaroan’ny mpikambana tao aminay nifidy kanefa ny zakan-dry zareo an-kilany vetivety kely dia vita kanefa dia efa antomotra ny fifidianana vao notakiana io RCS io. Manaporofo ny hosoka koa ny nahitana nomerao miverina in-droa tanaty lisi-pifidianana. 197 sisa niafaran’ny mpifidy voasoratra tanaty lisitra ary tsy mbola afaka nifidy koa ny 14 kanefa 12 000 ireo mpandraharaha ao Vakinankaratra. Sombiny ihany ireo, hoy izy, fa mbola maro ny dosie anananay ka antony nametrahanay fitoriana any amin’ny Bianco sy ny “Chambre administrative”.